Maalinta: Maarso 18, 2019
Ankapark waxay albaabada u fureysaa magaca 'Wonderland Eurasia'
Xadiiqadda ugu weyn ee Yurub, Ankapark, oo wax weyn ka tari doonta dhaqaalaha dalka iyo dalxiiska raasamaalkiisa, ayaa waxaa u haray maalmo kooban oo loogu talagalay magaca cusub ee WONDERLAND EURASIA gir in la dhigo. All of Ankara ee Turkey u horreeyo [More ...]
Madaxweynaha MHP Devlet Bahceli, Republic Square Manisa Metropolitan District iyo agaasimaha guud ee MASKI ee mashruucan iyo adeegyadii laga hirgaliyay 17 degmo, iyo sidoo kale furitaanka rasmiga ah ee isgoyska. MHP [More ...]
Kuvay-i Milliye Dhameystiray 70 ee is-weydaarsi fara badan
Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Burhanettin Kocamaz, Qorshaha ugu Weyn ee Gaadiidka iyadoo la raacayo dhismaha isgoyska Kuvay-i Milliye taallo-dabaq oo dabaq ah ayaa laga helay Taurus. Madaxweyne Kocamaz, 4'nın Mersin isgoyska iyo 70'nın% XNUMX'i [More ...]
BEBKA wuxuu bilaabayaa 2019 Taageerada Taageerada Taageerada Sanadeedka iyo Barnaamijyada Taageerada Farsamada B
Hay'adda Horumarinta Bursa Eskişehir Bilecik waxay bilowdey Taageero suuragal ah iyo Barnaamijyo Caawinaada Farsamo ee ururada samafalka ee muhiimka u ah horumarka gobolka waxayna dardar galin doontaa horumarka gobolka. Hay'adaha / ururada [More ...]
Jasiiradda Jasiiradda 7 waxay bilaabatay inay mar kale timaaddo Xarunta Adapazarı sanad kadib. Si kastaba ha noqotee, carqalada carqalada ee isgoysyada heerarka waxay keenaan daqiiqado halis ah. Tareenka Jasiiradda loo yaqaan Adapazari - Istanbul Express 7 sanadka [More ...]
2 Meelo Lagu Qasbay Intii Lagu Qaadayo Imtixaanka Tilmaame-Dhigashada ee Hong Kong
Labo tareen oo dhulka hoostiisa mara ayaa isku dhacay inta lagu gudajiray tijaabada nidaamka cusub ee calaamadaha digniinta ee degmada maamulka gaarka ah ee Hong Kong ee Shiinaha. Nidaamka cusub ee calaamadaha dhulka hoostiisa mara ee safka 02.00 ee waqtiga habeenkii ee Hong Kong [More ...]
Isticmaalka Istanbul Motorway's 65 Kilometer Qeybta ayaa la furay
Wasiirka Turhan ayaa ka qaybgalay xafladdii furitaanka jid-gooyooyinkii waqooyiga iyo galbeedka ee Bal Akhkesir iyo Akhisar-Saruhanlı ee Isgoysyada Istanbul-İzmir, oo uu furay Madaxweyne Erdoğan isagoo leh shir video ah. Xiriirka ugu horeeya ee Madaxweyne Erdogan, Gebze-Orhangazi-İzmir [More ...]
1915 Canon Bridge Qaboojiyaha Dhexdhexaadinta
Dhismaha Dhismaha buundada Çanakkale ee 1915, oo dhismihiisu socdo, ayaa maanta lagu sameyn doonaa xaflad. 18 Maarso xuska Shuhadada iyo sanadguurada 18aad ee Guusha Çanakkale [More ...]
Basku wuxuu ka baxaa Gebze ilaa Gebze Joogitaanka Suburban!
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa Gebze furay bishii March 12Halkalı Jidadka xaafadda ayaa soo jiidanaya fiiro gaar ah. Laynka xaafadaha ayaa bixiya rakaabka si faa'iido leh marka la eego waqtiga. Rakaabka isticmaalaya xariiqdan ayaa loo adeegsadayHalkalı [More ...]
Sahin: Waxaan Loo Diray Gaadiidka Cirka ee Gasiray
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Şahin ayaa tiri, baştan Waxaan dhahnay heesta dört Waxaan dhisnay shabaqyada birta afar jeer oo laga soo bilaabo dhulkii hooyo yıl sanado badan, xitaa waan maamuli kari waynay tareenka dhulka. Waxaan bilownay mashruuca khadadka Gaziray Suburban laba sano ka hor. [More ...]
Fikraddii ugu horeysay ee Alanya Akdag ayaa lagu qabtay
Bandhiggii ugu horreeyay ee Alanya Akdag Ski Festival oo ay soo qabanqaabisay Alanya Akdag Ski Specialization iyo Naadiga isboortiga iyada oo ujeeddadu tahay in la keeno xarun baraf ah Alanya ayaa lagu qabtay ka-qaybgalka qofka 350. Ku aaddan munaasabadda abaabulan [More ...]
Gawaarida Gawaarida iyo Gawaarida Gawaarida ee Adeegga loo yaqaan 'Denizli'
Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli waxay dhameystirtay furitaanka Gawaarida Dowlada Hoose ee Denizli iyo Gawaarida xamuulka iyadoo la qabtay xaflad si looga hortago in gawaarida gawaarida iyo kuwa xamuulka ee aan caadiga aheyn ay ku safraan bartamaha magaalada isla markaana ay xasiliyaan taraafikada magaalada. in Denizli [More ...]
Codsiga shirkadeed ee guuritaanka ee shirkadda 'Antalya Metropolitan Municipal' ee magaalada 'Macaamil Codsiyeed' Smart City Mobile Application 'wuxuu bilaabay in loo isticmaalo dan weyn. Codsiga guur-guura, oo bixin doona ku habboonaan nolol maalmeedka, ayaa lagu rakibay Apple Store iyo Google Play Store. [More ...]
Qadarka Baaskiilka ee Wadada Bariga iyo Socda
Wejiga koowaad ee mashruuca wadista baaskiil wadista, oo ay hirgaliso Dawladda Hoose ee Magaalaga oo ay dabooleyso Sunflower Bicycle Valley iyo Mithatpaşa Wagon Park, ayaa sii socota. Karamehmetoğlu wuxuu yiri, ile Mashruucan, Çark Creek [More ...]